Nepal Qatar Online.com : Interview | Jamkabhet
Search : Interview ‘मेरो मुटुमा त्यहि नेपाली रगत दौडिरहेको छ’ - प्रशान्त तामाङ
Posted On : Jun 26 2011 Sunday 08:53:57 AM | By : रवि रोषी On 0000-00-00 स्व. मदन कुमार तामाङ तथा रुपा तामाङको कोखबाट सन् १९८३ जनवरी ४ मा दार्जिलिङमा जन्मिएका प्रशान्त तामाङ दुईवटा दिदीहरुका कान्छा भाई हुन् । १२ कक्षा पास गरेर भारतीय प्रहरीमा भर्ती भएको ४ बर्षपछि प्रहरी व्याण्डमा आवद्ध भएका तामाङ भारतका तेश्रो इण्डियन आइडल हुन सफल भएका थिए । उत्कृष्ट गायकमा दर्ज भईसकेका उनले आफुलाइ गोर्खा पल्टन नामक चलचित्रबाट सफल नायकको परिचय बनाईसकेका छन् । तामाङसंग पत्रकार रवि रोषीले लिएको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेपःवाल्यकाल कस्तो रह्यो तपाईंको ?– सामान्य नै भन्नुपर्छ । घुमफिर, स्कुल तथा साथीभाईहरु संगनै विताइयो । खासै स्मरणीय कुराहरु केहि भएनन् ।गायक नै बन्छु भन्ने आत्मविश्वाश कहिले बाट जागृत भयो ?– गाउने काम त स्कुले विद्यार्थीजीवनबाट नै सुरु गरेको हो । तर पनि माध्यमिक तहको पढाई सकिएर कलेज ज्वाइन गरेपछि चाहिँ स्थानीय तथा पश्चिम बंगाल बाहिरको कन्सर्टहरुमा पनि गाउनलाई अफर आउने गर्दथ्यो र गाउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गएको थिएँ । भारतीय प्रहरी डिपार्टमेन्टको व्याण्डमा जागीरे भएपछि त्यहाँ दिनहुँ गाउने प्राक्टीस हुने गर्दथ्यो । मेरो खारिदै आएको स्वरलाई अन्दाज गर्दै प्रहरी प्रभागका साथीहरुबाट इण्डियन आइडलमा जान सुझाएपछि त्यहाँ जाने सोच बनाएँ । साथीहरुको अनुरोध र दवावमा जुन दिन इण्डियन आइडलमा जान्छु भनेर निर्णय गरेँ, त्यहि दिनबाट नै मेरो गायकीमा दम छ भन्ने आत्मविश्वाश पलाएको हो ।इण्डियन आइडलको उपाधि नै प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास नै बोकेर जानुभएको थियो त भाग लिन ?– युद्धमा लड्न जाने सिपाहीले मर्छु भनेर कहिले पनि गएको हुँदैन । मार्छु नै भन्ने आत्मविश्वाशको साथ युद्धमा गएजस्तै हार भएर फर्कनु अर्को वास्तविकता छँदा छँदै पनि जित्छु भन्ने मनशाय नै लिएर गएको थिएँ । मेरो गायन क्षमताको कदर गर्दै भारतीय मेरा प्mयान हरु तथा नेपाली भाषीहरुको अगाध मायाले गर्दा जित्न सफल भएँ । फेरि पनि मलाई भोट दिएर इण्डियन आइडलको ताज पहिराउन सघाउने मेरा सम्पुर्ण शुभचिन्तकमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।भारतीय नागरिक भएपनि नेपाली भाषी भएकै कारणबाट तपाईं माथि कुनै त्यस्ता अप्ठ्यारो महसुस त गर्नुभएन ?– त्यस्तो केहि पनि मैले सामाना गर्नु परेन । गीत, संगीत, साहित्य र संस्कृति कुनै क्षेत्र र देशमा मात्र सिमित नरहने भएकोले गीत संगीत सवैको साझा सम्पत्ति ठानेर नै माया गर्ने र सुन्ने भएकोले मैले पनि त्यहि माया पाएको छु । अपमान र अप्ठयारो कहिले पनि महसुस गर्नु परेन ।दार्जिलिङे तथा सिक्किमेली नेपालीभाषी साहित्यकार, कलाकार तथा गायककार हरुलाई कि त कालले चाँडै लान्छ कि त काठमाण्डौँले तान्छ भन्ने कुरालाई तपाईंले पनि भारत छोडेर नेपाल प्रवेश गरी चरितार्थ गर्नुभयो नि । कतै भारतमा अवसरको आशा नरहेर नेपाल प्रवेश गर्नुभएको हो ?– नेपाली साहित्यकार र कलाकारको हकमा चाहिँ भारतको बजार सानो भएकोले ठूलो बजारको खोजीमा काठमाण्डौँ प्रवेश गरेको हुनुपर्छ । तर मेरो भने त्यो अवस्था सिर्जना भएर काठमाण्डौँ पसेको चाहिँ पक्कै होइन । आफु संग गायन क्षमता भएर पनि भारतमा गीतहरु गाउनुको लागि सधैँ खुट्टा मोल्ने प्रवृत्ति हावी भएकोले आफ्नो गायन प्रतिभाको अपमान हुन नदिनकै लागि स्वाभिमानले भारतीय बजारमा घुँडा टेक्न मानेन र म नेपाल प्रवेश गरेको हुँ । कसैले गाउनको लागि अफर गर्छ भने जुनसुकै भाषाको गीत गाउन तयार छु । तर हस् हजुरमा विश्वाश कहिले पनि राख्दिन र झुक्न चाहन्न । काठमाण्डौँलाई मैले कर्मथलोको रुपमा रोजेको त्यसैको नतिजा होे ।भारतमा गायन क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्न सफल नेपाली मूलका उदितनारायण झा ढाका टोपी फुकालेर भारत पलायन भएभने तपाईं इण्डियन आइडल घोषित भएको दिनमा नै स्टेजमा ढाका टोपी पहिरिएर नेपाल फर्किनुभयो । आखिर के कुराले नेपाल प्रवेश गर्न तपाईंलाई प्रेरित गर्यो ? पैसा कमाउनको लागि त नेपालको बजार भन्दा भारतको बजार नै राम्रो थियो होला नि ?– उदित नारायण झाको मामलामा बोल्नु पर्दा भारतीय सम्मानबाट सुशोभन हुन आफुलाई भारतीय हुँ भन्ने कुरा म अलि कच्चा उमेर हुँदैमा सुनेको हुँ । उहाँले भारतीय मिडीयाहरुमा आफुलाई भारतीय हुँ भन्नुभएको भएपनि किन भन्नुभयो भनेर प्रश्न गर्न चाहन्न । त्यो उहाँको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो । तर तपाईंले भने जस्तै कालले यो दार्जिलिङे ठिटोलाई लाने उमेर नभए पनि काठमाण्डौँले तानेको भने पक्कै स्वीकार्छु (हाँस्दै) । मेरो पूर्व वंशजको थातथलो नेपालमा भएको र नेपाली भाषी भएको हुनाले र नेपालले मलाई केहि गुन लगाएको छ । त्यहिकारणले मलाई नेपालले तानेको हो । मैले आफ्नो प्रतिभालाई पैसा कमाउने माध्यम मात्र बनाउन हुँदैन भन्ने सोचेँ । मेरो मुटुमा त्यहि नेपाली रगत दौडिरहेको छ । नेपालीभाषी हुनुको गर्वले मलाई नेपाली संस्कृति र नेपाली भाषाको गीतहरु गाउननै घच्घच्याईरह्यो । पैसा अत्यावश्यक वस्तु हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि मैले त्यति महत्व दिइन । त्यहि भएर नेपालको गीत र अभिनयको बजारलाई मैले रोजेको हो ।नेपालमा आएपछि तपाईंलाई कसैले नेपाली नागरिकता दिन्छु । नेपाली भएर चिनिनुपर्छ भनेर भनेनन् ?– नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. गिरीजा प्रसाद कोइरालाले नेपाली नागरिकता लिनको लागि आग्रह गर्नुभएको पनि हो । म गायक भएर श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशका हिन्दी भाषा बुझ्ने सवैको साझा गायकको रुपमा परिचित भईसकेको हुनाले नेपाली नागरिकता नै लिने आवश्यकता ठानिनँ । अर्को कुरा लिईहालेको भएपनि भारतीय सरकारी जागीरमा संलग्न भईरहेको र नेपालको नागरिकता लिएको खण्डमा नेपालमा मेरै कुरालाई अर्को विवादको विषय बनाउँछन् कि भन्ने कारणले लिन चाहिन । म सवैको प्रिय गायक भएर बाँच्न चाहन्छु । त्यसमा पनि सवैभन्दा धेरै नेपालको माया र आशिर्वाद चाहिएको छ ।तपाईं गायकबाट अहिले नायक पनि बन्नुभएको छ । किन अभिनय क्षेत्रलाई रोज्नुभएको ?– आफु संग क्षमता छ भने देखाउनुपर्छ भनेर नै मैले अभिनय क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो । जसलाई गोर्खा पल्टनले प्रमाणित गरेर पनि देखायो । मलाई गायन संगसंगै अभिनयमा पनि पहिले देखि नै रुचि थियो । त्यसको लागि पनि मैले नेपाललाई रोजेको हो । गोर्खा पल्टन बजारमा आईसक्यो भने बजारमा आउन लागेको अंगालो यो मायाको र किन मायामा भन्ने चलचित्रबाट कस्तो आशा राख्नुभएको छ ? यस बाहेक अरु चलचित्रमा अभिनयको लागि पनि अफरहरु आएको छ कि ?– अंगालो यो मायाको चलचित्रमा मैले हर्षिका श्रेष्ठ र विजयिता वराईलीसंग अभिनय गरेको छु भने किन मायामा सुिमना घिमिरेसंग अभिनय गरेको छु । उनीहरुको अभिनय पनि परफेक्ट छ । दुवै चलचित्रहरु प्रेम, दर्शन र समाजमा केन्द्रित कथा भएको हुनाले यसले पनि नेपाली चलचित्रको फाँटमा राम्रो धाक जमाउने छ भन्ने विश्वाश लिएको छु । दुइवटा फिल्महरु एकैपटक बजारमा आउने तयारीमा पनि रहेको छ । त्यसको नतिजा चाहिँ कस्तो आउँछ, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । त्यहाँ पनि मैले शशक्त भूमिकामा शशक्त अभिनय गरेको छु । अरु चलचित्रहरुमा पनि नायकको भूमिकाको लागि अफर आएको छ । गायन संगसंगै अभिनयलाई पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ समय दिनेछु ।अहिले सम्म कतिवटा गीतहरु गाईसक्नुभयो ? एउटा गीत गाए बापत कति लिने गर्नुभएको छ ?– हाल सम्म मैले जम्मा ३०, ३२ वटा मात्र नेपाली गीतहरु गाएको छु । मैले गीत गाए बापत यति नै लिन्छु भनेर व्यवशायिक रुपमा प्रस्तुत नभएकोले मेरो गाउने गीतको कुनै रेट नै छैन ।तपाईंको वैवाहिक जीवनको बारेमा केहि बताईदिनुहुन्छ कि ? विवाह भएपनि केटी फ्यानहरुले कत्तिको मरिहत्ते गर्छन् ?– केटीहरुको त कुरै नगरौँ । कति क्रेजी फ्यानहरुले त अंगालोमा चेपेको चेपै गरेर हैरान पारिदिन्छन् । म चाहिँ विजुलीको खम्बा झैँ उभिएर बस्नु सिवाय केहि विकल्प रहँदैन । उनीहरुले मलाई दर्शाउने सदासयता प्रति मात्र भुतुक्क हुन्छु । केटी फ्यानहरुको स्पर्शलाई खासै वास्ता गर्दिन । मैले नागालैण्डवासी गीता आलेसंग मागी विवाह गरेको हो । हामी वीचमा प्रेम चाहिँ पहिले देखि नै थियो । विवाह हुनु भन्दा पहिले देखिनै पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो भएको कारणले पनि हाम्रो सम्बन्धलाई अझ गाढा बनायो । तर हाम्रो पहिलो पटकको भेट चाहिँ कन्सर्ट देखाउन गएको वेलामा बैंगलोरमा भएको हो । उनी किंगफिसर एयरको एयर होस्टेजमा कार्यरत छिन् । साह्रै राम्रो सम्बन्ध रहेको छ ।तपाईंको कन्सर्ट रेट कति हो ? एउटा कार्यक्रममा कति लिने गर्नुहुन्छ ? मूलुक वाहिरको कार्यक्रममा सवै भन्दा दर्शकहरुको उपस्थिती र रमाइलो अनुभव कुन देशमा बटुल्नुभयो ?– नेपालमा गरिने कन्सर्टहरुको रेट विदेशमा गरिने रेट भन्दा कम नै लिने गरेको छु । विदेशमा चाहिँ कार्यक्रमको समयावधि हेरेर अढाई लाख भारुदेखि माथि लिने गरेको छु । कतारमा यति संगीत प्रेमी रहेछन् भन्ने कुरा दुइपटक कतारको कार्यक्रमबाट अनुभव बटुलेको छु । कतारमा यदि कार्यक्रमको लागि अफर आएमा विशेष महत्व दिएर आउने वाचा पनि गर्न चाहन्छु । अरब भाषी दर्शकहरुले समेत आफ्नो गीतमा नाचेर गरेको रमाईलो क्षणको सम्झना भने मेरो मस्तिष्कमा सधैँ ताजा रहिरहनेछ । Other Interviews निरन्तर नृत्य क्षेत्रमा लागि रहनेछु ।संगीता लामा - संगीता लामा
दोहाको एक भेटमा भनिन रोजगारीमा आउनु भन्दा अघि उनले उनकै घरको कोठामा नृत्य स्कुल खोलेर बच्चाहरुलाई नृत्य सिकाउने काम गरेको बताईन् । घर परिवारवाट पनि उनलाई नृत्य क्षेत्रमा लाग्न पूर्णरुपमा समार्थन मिलेका बताईन् ।
[ Read More... ] सरकारले अथक जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सकेको छैन् । सीताराम गोले प्रेम स्याङतान (प्रेम लामा ) - सीताराम गोले
आपनो नागरिकलाई अझ दक्ष बनाएर अरु प्रोजेक्टहरु निर्माण गर्न तिर सरकार लाग्दैनन् बरु विदेशीको लगानीमा बन्न लागेको प्रोजेक्टहरुमा पनि चलखेल गर्ने र कमिशन र आपनो मान्छे त्यो प्रोजेक्टमा सामेल गराउन नपाए वा काम गर्न नपाए प्रोजेक्ट नै बन्न नदिने र बन्द गराउने जस्ता कार्य गर्न पनि पछि पर्देनन् ।
[ Read More... ] मेहनती, इमान्दार र शालिन व्यवसायी ई. कोमलबहादुर सिंह - ई. कोमलबहादुर सिंह
नेपालीहरु कोहीपनि विकृति र विसंगतितिर लाग्नु हुदैन । यहाँ पानपराग,पान, खैनी र सिडीहरु अवैधानिक रुपमा बेच्ने, जाँडरक्सी बनाएर बेच्ने, लंगुरबुर्जा खेल्ने खेलाउने काम भईरहेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि संघसस्थाहरु र दुतावासले संयुक्त रुपमा पहल गर्नुपर्दछ । दुर्इृचार पैसाको लोभ र लालचमा आफनो मजदुरीपनि गुम्ने जेल जानुपर्ने अनि कुसमयमा रित्तोहात नेपाल फर्कर्नुपर्ने हुन्छ । कतारको कानुनलाई हामीले कहिल्यैपनि उलंघन गर्नु पाइन्दैन र वर्जित कुराहरु गर्नु गराउनु अपराध हो भन्ने वोध सबैमा हुनैपर्छ । म कतारमा छु यहाँको कानूनको सिमाबन्धनमा बाँधिएको छु भन्ने ज्ञान चाही हुनैपर्छ ।
[ Read More... ] आफ्नो देश कहिलै नफर्कने भए बंगलादेशी प्रदेश चाचा (रवि रोषी / दोहा) - प्रदेशचन्द्र बोस
“चैत बैशाखमा नपाएको मही र पुस माघमा नपाएको पोइ” को कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने उक्ति बंगलादेशी प्रदेशचाचाको श्रीमतीले ओकलेर प्रमाणित गरिदिएकी छिन् ।
[ Read More... ] छली प्रेमीले बरवाद बनाएको मेरो जीवन - सजना गुरुङ्ग (इजरायल)
म आश्चर्य हुदै भने , " प्रतापको डीवोर्स भै सकेको छ फेरि कसरी हजुर प्रतापको वाइफ ? " भन्दा उनले भनिन् , " तिमी इजरायल बाट हो ? तिमी त प्रतापलाई अति माया गरछौ रे , प्रतापको लागी घर किन्दिन्छु , बिजनेस गर्ने पैसा दिन्छु भनेर भन्छौ रे , सच्चि हो ?